Zayat Shopping | About Us
ဇရပ်ပြည်တွင်းဖြစ်သည် ဝယ်ယူသူများနှင့် ရောင်းချသူများအား အွန်လိုင်းမှအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နိုင်သည့် အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အွန်လိုင်းဈေးကွက်မှတဆင့် E – commerce ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ဝန်ဆောင်မှုများပေးသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မြန်မာအစားအစာ၊ မြန်မာထုတ်ကုန်များကို သုံးစွဲလိုသော ပြည်ပရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ပြည်တွင်းဖြစ်ထုတ်ကုန်များကို တစုတစည်းထဲ လွယ်ကူသက်သာစွာ ဝယ်ယူနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဇရပ်ပြည်တွင်းဖြစ် ကို ဘာကြောင့်သုံးသင့်လဲ?
ဇရပ်ပြည်တွင်းဖြစ် ထုတ်ကုန်တွေကို ဘယ်လို စိစစ်ပြီးဝယ်ယူမလဲ?
ဇရပ်ပြည်တွင်းဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဆိုတာ အားလုံးအတွက် ဝယ်ယူရလွယ်ကူပြီး ပြည်ပသွင်းကုန်တွေ ထက်လည်း ဈေးနှုန်းသင့်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလို ပြည်တွင်းဖြစ်ထုတ်ကုန် အများကြီးထဲကမှ ကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်တော်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရွေးဝယ်ချင်ပြီဆိုရင်တော့ ဒီလိုအချက်လေးတွေကို ဆန်းစစ်ပြီး ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။